ထိရောက်သောဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကိုရေးသားရန် ၁၀ ဆင့်
အင်္ဂါနေ့, မေလ 17, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဤအရာသည်မူလတန်းစာမူတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းသင်မည်သို့ရေးသားရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တောင်းခံရန်လူအများကကျွန်ုပ်အားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် ထိရောက်သော blog post။ ဒါ့အပြင်တစ်ခါတစ်ရံမှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာဘာလဲ၊ အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်မှု၊ ဘလော့ဂါကသူရေးသားသည့်အခါစာဖတ်သူကိုပင်စဉ်းစားခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးကြောင်းထပ်မံထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုကဘာလဲ ဗဟိုစိတ်ကူး ပို့စ် သင်သတ်မှတ်ထားသောမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်သင်ကြိုးစားနေသည့်အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်းတွင်မတူကွဲပြားသောအတွေးအခေါ်များကိုရောစပ်ခြင်းဖြင့်လူများကိုမရောထွေးပါနှင့်။ ခေါင်းစဉ်ထူးခြားပြောင်မြောက်ပါသလား မှတ်သားလောက်သောအကြောင်းအရာများကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဖြန့်ဝေပြီးစာဖတ်သူများပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ပါ ဘယ်လိုပို့စ်အမျိုးအစား မင်းရေးမယ်
ဘာ သော့ချက်စာလုံးတွေ မင်းရဲ့ Blog post ကိုပစ်မှတ်ထားလို့ရမလား။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဘလော့ဂ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသော့ချက်စာလုံးတွေကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့မရှိပေမယ့်စာဖတ်သူအသစ်တွေရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးကိုဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်းသို့မထည့်ပါနှင့်။ စကားလုံးအနည်းငယ်ကိုသာအာရုံစိုက်ရန်အဆင်ပြေသည်။
သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးချပါ သင့်ရဲ့စာမူခေါင်းစဉ်၊ သင့်တင်ပို့ချက်၏ပထမဆုံးစာလုံးများနှင့်သင့်ရဲ့ပထမဆုံးစာလုံးများမှာ meta ဖော်ပြချက်. ရဲရင့်သောသော့ချက်စာလုံးများ သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုခေါင်းစဉ်ငယ်များဖြင့်သုံးခြင်း၊ သင်၏ပို့စ်တွင်ဖြန်းခြင်းသည်သင်၏ပို့စ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်မည်သို့ရည်ညွှန်းသည်ကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားစေနိုင်သည်။
ရှိပါသလား အခြားဘလော့ဂ်များ မင်းရဲ့လက်ရှိရေးသားချက်ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာမင်းရည်ညွှန်းနိုင်သလား။ အခြားပို့စ်များနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်စာဖတ်သူကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနစ်မြုပ်စေပြီးသင်ရေးသားခဲ့သောအကြောင်းအရာဟောင်းများကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်သည်။ ပြင်ပမှချိတ်ဆက်ခြင်းသည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုတိုးပွားစေပြီးသင်၏ပို့စ်ကိုထောက်ပံ့ရန်အစာထပ်မံကျွေးမွေးနိုင်သည်။
ရှိပါသလား ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ် စာဖတ်သူကိုအထင်ကြီးစေနိုင်တာကိုသင်အသုံးချနိုင်မလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်စကားလုံးများကိုမကြာခဏမမှတ်မိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုကိုယ်စားပြုရန်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်တစ်ခုရရှိခြင်းသည်သင်၏စာဖတ်သူများနှင့် ပို၍ စွဲမှတ်စေလိမ့်မည်။ ရုပ်ပုံသို့အခြားစာသားထည့်ခြင်းသည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည် SEO ဆိုသည်မှာ။ (အကယ်၍ ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်တန်လျှင် ... an) infographic 100,000 နှင့်တစ် ဦး တန်ဖိုးရှိသည် ဗီဒီယို တစ်သန်းရကျိုးနပ်!)
ကျည်ဆံရမှတ်များ သုံး၍ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်ရေးနိုင်ပါသလား။ လူတွေကဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကိုသူတို့စကင်ဖတ်တာလောက်မဖတ်တတ်ဘူး။ အစက်အပြောက်များ၊ စာပိုဒ်တိုများ၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်များနှင့်ရဲရင့်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းကလူများအားဤစာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်နှင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးဖော်ရန်လိုမလိုဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
လူတွေကိုဘာလိုချင်သလဲ do သူတို့ post ကိုဖတ်ပြီးနောက်? သင့်တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့တစ်ခုရှိပါက၎င်းတို့ကိုသရုပ်ပြရန်သို့မဟုတ်သင့်အားဖုန်းဆက်ရန်ဖိတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောထုတ်ဝေမှုဖြစ်ပါကခေါင်းစဉ်ပေါ်ရှိထပ်ဆောင်းစာမူများကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ကွန်ယက်များသို့မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Retweet နှင့် Like ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။ )
ဘယ်လောက်ကြာ သင့်ရဲ့ blog post ဖြစ်သင့်? နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အမှတ်ကိုဖြတ်ပြီးကြာအဖြစ် - ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှ။ ငါမကြာခဏငါ၏အပို့စ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ငါခေါင်းစဉ်အပေါ်အနည်းငယ် bloviated ကြောင်းတွေ့ရှိရ - ဒါကြောင့်ငါကသန့်ရှင်းရေးနှင့်အထဲကရှိသမျှသောထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယဖြတ်တောက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါရေးခဲ့သည့်ပိုမိုရေပန်းစားသော post မှာ Blog Post Ideas ၂၀၀ ဖြစ်သည်။ ငါစာပိုဒ်များကိုရေးနေလျှင်၊ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်သို့မဟုတ်နှစ်ပုဒ်ထက်ပိုသောစာပိုဒ်တိုများကိုသာဆက်လက်ထားလေ့ရှိသည်။ တနည်းကား, အလွယ်တကူ digestible အောင်အောင်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Tag နှင့်အမျိုးအစားခွဲပါ သင့်စာမူကိုသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်သင်၏တင်ပို့ချက်ကိုပရိသတ်ကိုအကြောင်းအရာအောက်တွင်ရှာဖွေစေချင်သည် Tagging နှင့်အမျိုးအစားခွဲခြင်းသည်သင်နှင့်သင့်စာဖတ်သူများအားသင်၏ site ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သတ်သည့်အခါအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပိုဆောင်းအကြောင်းအရာများကိုစုစည်းရန်လည်းကူညီနိုင်သည် ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ.
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ပြပါ သင့်ရဲ့ရှုထောင့်ပေး။ စာဖတ်သူများသည်အမြဲတမ်းအဖြေများကိုသာရှာဖွေရန်မရှာကြပါ၊ ထို့အပြင်သူတို့သည်လူများ၏အဖြေနှင့်ပါတ်သက်သည့်အဖြေများကိုရှာဖွေရန်လည်းကြိုးစားနေကြပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာသည်စာဖတ်ပရိသတ်အမြောက်အများကိုမောင်းနှင်နိုင်သော်လည်းမျှတပြီးလေးစားမှုရှိနိုင်သည်။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရှေးရှေးဆွေးနွေးငြင်းခုံ ... ဒါပေမယ့်ငါအစဉ်အမြဲငါအမည်ဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်မြည်းတူသောရှာဖွေနေခြင်းမရှိဘဲ, အကြောင်းအရာအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
Social Media သည် SEO နည်းဗျူဟာတစ်ခုလား။
မေလ 18, 2011 မှာ 12: 59 AM
မေလ 25, 2011 မှာ 12: 51 pm တွင်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပို့စ်တစ်ခုမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောရာထူးကိုအဆင့်သတ်မှတ်လျှင်ဤရာထူးသည်မြင့်မားသည်။ ပို့စ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကပို့စ်ရဲ့ဥပမာတစ်ခုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ # ၄ အခြားဘလော့ဂ်ပို့စ်များ - စာမူတွင် ၁၀ ခုရှိပါသလော။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Vic @ စီးပွားရေးသိကောင်းစရာများဘလော့ဂ်
11:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 54
11:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 37
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ။ စာကောင်းကောင်းရေးနည်းကိုအခြေခံပြီးပြန်သွားတာမကောင်းဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာငါအသုံးပြုသောပလက်ဖောင်း (Compendium) သည်ကျွန်ုပ်အားဤအဆင့်များစွာကိုလမ်းညွှန်ကူညီပေးသည်၊ သို့သော်သင်၏ပထမခြေလှမ်းမှာအလွန်မှန်ကန်ပြီးကောင်းမွန်သောစာရေးရန်ကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ အရမ်းရယ်စရာကောင်းတာကမင်းရဲ့အကြောင်းအရာအတွေးပေါင်း ၂၀၀ ကို post ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ချိတ်ထားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသော်လည်းအလွယ်တကူအစာကြေ။ လူများအားသင်ဒီမှာဖော်ပြထားသည့်အခြားအဆင့်များ၌လုပ်ဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင့်စာဖတ်သူများကဒီ link ကိုထွက်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
11:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 50
ဟေးဘရိုင်ယန်! အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မှတ်ချက်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် - အားလုံးကောင်းကောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်!
12:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 26
အားလုံးအကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ။ ငါဘလော့ဂ်လောကမှာအသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ထိရောက်စွာရရှိရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ငါကျိန်းသေငါ့လာမယ့်ဘလော့ဂ်များတွင်ဤအကြံပေးချက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
12:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 54
27:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 29 တွင်
ဘလော့ဂ်မှာကျွန်တော်တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆောင်းပါးပါ။ အခြေခံများကိုအလွန်နားလည်သောနည်းဖြင့်ရှင်းပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ထို့နောက်“ ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်လက်မှတ်ထိုးသလား၊ သင်ယူရန်”“ Post as …” ကိုနှိပ်ပါကဘာလဲ?
စကားမစပ်, ငါ CharacterMaker အဖြစ်လူသိများတယ်။